abakhiqizi Wanamuhla zasendlini ukunikela hostesses amathuluzi enemisebenzi ezihambisa futhi ukusheshisa inqubo ukupheka. Nokho, ubani wayenqaba ukuba emhlabeni nokulungiselela ikhishi compact yemifino, angasetshenziswa ngomzuzwana ukuze nquma wanquma cishe noma yikuphi imikhiqizo? Namuhla emakethe emelelwa eziningi ezihlukahlukene imishini efanayo lemikhiqizo ezahlukene, kanye umthengi kunzima ukuzulazula bese ukhetha inkampani engcono.
Isilinganiselwa endlu Imishini, esihlelwe ngomumo ngesisekelo the imibono yabantu abasemazingeni aphansi ukuthandwa nentengo kusikisela ukuthi lokuma ukusebenza nokwethembeka brand German ezifana Siemens, Miele, Liebherr, Bosch. Electric Slicer Bosch kufanele wathola udumo kalula yayo ukusetshenziswa futhi ngemali ephansi.
Idivayisi yisikhathi esincane imibuthano narezhet ukudla, emapheshana, cubes ngisho chips. Gaya kungaba baqede izitshalo, izithelo, imifino kanye nokunye. Lapha, into esisemqoka ngempela kulabo bayakwazisa induduzo akanayo isikhathi liphuphe. Cabanga eduze kwakhe futhi uqonde ukuthi ewusizo kuba.
Yini can idivayisi?
Household yemifino umsiki Bosch hhayi kuphela olungisisa isihloko, kodwa futhi kuyinto umsizi professional ukucutshungulwa imikhiqizo. Isisetshenziswa isibe idla ubhedu nje embalwa eyedlule njengoba uyinkosikazi futhi chef. Idivayisi ngokuvamile uhlanganisa endishini ezijulile, injini kagesi kanye nesethi Imibhobho esemzimbeni (amadiski / izindwani) ngamazinyo ezahlukene.
Esikhathini onobuhle ezibizayo, lezi akwazi ukugcina zakhiwe ukudla engagqwali steel, kusukela kumadivayisi ezishibhile kukhona plastic. amayunithi Professional of ukuqina ezahlukene, ukusebenza eliphezulu futhi multi-msebenzi. Kodwa ekhaya ungathola i inqubo engabizi ezivamile.
It kalula uhlakaze endishini izithako ukuwafaka futhi iholide amalungiselelo. Kulokhu, zonke izingcezu etholakala wekugcina, enhle okumnandi. Ukusebenzisa lisebenze ngeke nobunzima - ngokwanele ukuba abeke izakhi ezidingekayo ku le ndlu, uvale lid bese ucindezela inkinobho. Ezinye izindaba zika-Bosch yemifino kagesi umsiki enza uqobo, futhi ngeke kuphela ukugcwalisa imifino noma izithelo sigqoka ewusizo.
Abanye onobuhle bayakwazi esikhundleni okukhulu ukudla processor. Basuke ifakwe ezihlukahlukene imimese, elingasebenza njengesibuko blender, grinder futhi juicer. Idivayisi iphephile ngokuphelele ngokungafani graters manual, uma kunesidingo, kusheshe pyurirovat ukudla, usike tincetu wakhe abacaphuni kanye cubes.
Vegetable umsiki Bosch kagesi (isithombe sibonisa iyunithi) yayincane, engasindi, eyenziwe impahla ductile futhi iphephile, futhi uhlinzekwa ummese self-imimese. It has a isitsha ejulile ne Imibhobho esemzimbeni esikhiphekayo (hhayi wonke amamodeli). Uma ukuthenga iklayenti ithola isiqinisekiso izinga izinyanga eziyisithupha. izimpahla ezingekho esimweni kungase kubuyiswe kungakapheli nenyanga (izinsuku ezingu-30).
Electric Slicer Bosch - kulondolozwa nemishini emizi yesimanje. umshini Compact ngeke uvumelane ngokuphelele kunoma iyiphi elingaphakathi khulula kusuka ukusika imikhiqizo. Awunayo izinyembezi lapho ukusika noma bezihlikihla onion, ukuchitha isikhathi esiningi zokupheka, futhi okubaluleke - umonakalo kungekho okwengeziwe ikhaba ummese.
Ngenxa yokuba khona akwazi ukugcina ezibaziweyo abe ikamelo okubanzi umcabango. Imibhobho esemzimbeni enza kube lula ugaye lenyama ukugxusha, wenze udaka alube imifino, izithelo kanye nemikhiqizo yobisi. Le nqubo elula ukugeza ngesandla noma Umshini wokuwasha izitsha. Abakhiqizi yalesi nkampani liyasiqinisekisa linokwethenjelwa, ukuphepha kanye sakugcina amandla ukusetshenziswa a lifetime eside.
Ukufundiswa kuyinto amasu etholakalayo ichaza idivayisi isebenza - zilethwe ngesiRashiya, ngakho ngeke kudingeke ezikudidayo phezu yokudlulisa. Uma kagesi yemifino umsiki uyosabalala Bosch, izingxenye ezisele kungenziwa yayala inthanethi.
Nakuba nomkhiqizi umise ngokwaso ohlangothini oluhle, kuyafana lapho uthenga ukuncoma ukuba banake imininingwane ethile. Amathuluzi amaningi isikhathi eside futhi bafake ukumelana yilawo zenziwa aluminium kanye insimbi engagqwali. Lezi izinto ezimbili ngeke oxidize, ancibilike futhi crack, ngokungafani kuya plastic. idivayisi okunjalo kancane ezibizayo, kodwa izindleko, kube khona ukwenanana ngesithakazelo.
Amatebhe yemifino umsiki Bosch kagesi kuhlanganisa isethi ezingeziwe Imibhobho esemzimbeni ngamazinyo ezahlukene. Kuyinto efiselekayo ukuthi izindwani ku akwazi ukugcina kukhona esikhiphekayo, kanye idivayisi ngokwayo. Uncamela idivayisi, okuyinto ushayela ikhaba uma zokugwema ukuphuka angase indawo. Buza umxhumanisi wethu, kungakhathaliseki ukuthi imishini ukucubungula ukudla okuqinile ezifana amathanga kanye radishes. funda ngokucophelela lewaranti kanye inkathi ukusebenza kwemishini. Kuyasiza ukufunda imicabango yabantu abathengi 'kunethiwekhi ye isibonelo othize.
Electric Slicer Bosch: Izibuyekezo zabantu
Abanikazi iyunithi wenkampani German ngentshiseko ukhuluma lezimpahla. Kulula ukusebenzisa, cishe isisindo futhi stylish. Zonke izindwani ziyasuswa kalula futhi ifakwe, cut uqonde kahle, oqoshiwe, imikhiqizo nepepper futhi phansi fresh futhi abilisiwe. Ngisho ngensingo eminyakeni ungazange tupyatsya Imibhobho esemzimbeni, futhi umzimba akuyona overwritten, futhi ngeke inqamuke.
Ngokusho abesifazane kakhulu, lo mkhiqizo kufanele ibe njalo ikhishi. Lona umsizi best ukupheka, kuba lula ukusebenza futhi wenza izitsha aesthetically ezikhangayo. Ngesikhathi esifanayo izandla zakho ngaso sonke isikhathi ngikhululekile futhi ngihlanzekile. Asikho isidingo ukusebenzisa amagilavu.
Ikakhulukazi kusiza kudivayisi ngamaholide, uma kudingekile ukulungisa izitsha eziningi ezahlukene. phezu Umzuzu nje phambi umkhiqizo ubalekela ngaphandle ukunyakaza ezingadingekile kanye nemizamo. Futhi kuvela elinye iqiniso obalulekile - iyithimba uyakwazi esikhundleni zikagesi eziningana: inyama grinder, grater, futhi blender. Lena inzuzo ngezimali.
Izindleko kuzoncika ikghono ukucushwa kwe izimpahla. Ibhajethi yemifino umsiki izobiza ruble 1500. We ukweluleka hhayi ukusindisa ku zasendlini.
Isilinganiso esishunyekiwe Ohhavini kagesi Sibutsetelo izinhlobo, abakhiqizi, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Shumeka efrijini: indlela yokukwenza
Colombia ifulege: igolide, nolwandle, igazi elachithwa ukuze inkululeko
I uhlu olwehlayo Excel